समाचार टिप्पणी : पत्रकारिता क्षेत्रको गलत अभ्यासबारे… | eawadhpost.com
Posted:: (1 year ago) | March 19, 2019| 583 views
– प्रभात देवकोटा
कहाँबाट लेख्न सुरु गरौं, कसरी सुरु गरौं ! लामो समयसम्म मैले निर्णय लिन सकेको छैन । तर पनि लेख्नु त छ नै । किन कि विषय र त्यसको व्यापकता हाम्रो सिंगो समाजसँग जोडिएको जो छ ।
सोमबार बिहानै एउटा समाचार पढेपछि अनेकन कुराहरु खेल्दै हल्लिएको मेरो मथिङ्गल लेखनीबाटै भएपनि केही हदसम्म शान्त त पार्नै प¥यो । चाहे अरुको मथिङ्गल किन नहल्लियोस् । साँच्चिकै निक्कै असहज हुँदो रहेछ, आफैले अपनाएको पेशाको बदनामीबारे चित्रण गर्न ।
गलत विषय र प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार व्यक्तिले बाहिर ल्याउनुको साटो उल्टो नजरअन्दाज र संरक्षण गर्दा त्यसले भविष्यमा झनै ठूला दुष्परिणामहरु निम्त्याउने निश्चित रहन्छ । जिम्मेवार भनिएका व्यक्ति अनि संस्थाबाट नै गलत कार्य हुन्छ र ऊ आर्थिक अनियमितताजस्ता विकृतिलाई संस्थागत गर्दै भ्रष्टिकरणतर्फ उद्दत रहन्छ भने त्यसमा लगाम लगाउनु अपरिहार्य हुन्छ । लगाम लगाउने जिम्मेवारी सरकारी निकायको मात्र नभइ पेशा व्यवसायभित्रै भएकाहरुको कर्तव्य पनि हुन आउँछ । भलै त्यसबाट क्षणिकरुपमा पेशाकै बदनामी किन नहोस् ! कालान्तरमा भने पेशा÷व्यवसायप्रतिको विश्वास जोगाउन सार्थक पहल हुन सक्छ ।
समाजको ऐना भनेर चिनिने पत्रकारिता पेशाको प्रतिष्ठा, मर्यादा र सम्मानप्रति नै आँच पु¥याउने व्यवहारहरु यतिबेला कतिपय पत्रकारहरुबाटै भएको छ । औपचारिक कार्यक्रम वा फिल्ड रिपोर्टिङमा कसैले निम्तो गर्दा भत्ता नभइ नजाने, समाचार लेखेवापत पनि पैसा लिने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने लगायतका विषयले बाँकेको पत्रकारिता गन्हाइरहँदा अर्को एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ । जसले बाँकेको पत्रकारितालाई नै लज्जित बनाएको छ ।
पत्रकारितामा अख्तियार काण्ड !
लामो समयदेखि बाँकेका अधिकांश संचारकर्मीहरुमाझ चर्चामा रहेर पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पत्रपत्रिका र न्यूज पोर्टलमा सम्प्रेषित भएपछि न्यूज कटिङ्ग र पोर्टलका लिङ्क भाइरल भइरहेको छ । पत्रकारहरुमाझ सिमित रहेको विषय सार्वजनिक बहसमा प्रवेश भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका पदाधिकारीहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरेर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा परेको उजुरीबारे समाचार सम्प्रेषण भएपछि यहाँको पत्रकारिताको नकारात्मक पक्षबारे भइरहेका टिकाटिप्पणी र बहसले ब्यापकता पाएको हो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसँगको सहकार्यमा गत जेठ ३० गते आयोजित ‘मिडिया दीगो विकास र यसका चुनौती बिषयक’ अन्तरक्रियामा उपस्थित भएका÷नभएकाहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी महासंघका पदाधिकारीहरुले रकम बुझेको प्रकरणले पत्रकारितालाई नै बदनाम तुल्याएको छ ।
व्यवसायीक संस्था र सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रप्रति नै धब्बा लाग्ने कुनै पनि कर्तुत विल्कुलै क्षम्य हुँदैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा व्याप्त तर दबिएका÷दबाइएका गलत प्रवृत्तिहरु उजागर हुनु व्यवसायीक शुद्धिकरणका निम्ति एउटा प्रमुख कडी बन्न सक्छ । पत्रकारितामा देखिएका विकृति÷विसंगतिबारे अब घनिभूत बहस गर्दै गुमेको साख फर्काउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
भत्ता र पत्रकार
जता–जता भत्ता त्यता–त्यता पत्रकार भन्ने टिकाटिप्पणी बाँकेमा यतिबेला नौलो रहेन । पत्रकारका संघ÷संस्था र पत्रकारहरुसँग ठोक्किने जोकोही पनि यो कथनसँग वाकिब नै छन् । यसमा लुकाइराख्नुपर्ने कुरा केही छैन ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँके एक अधिकारीले त हालसालै भत्ता नभएको वा कम भएको कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारहरुले अनिच्छा व्यक्त गर्ने गरेको हाकाहाकी नै भनिसकेका छन्, ‘भत्ता उपलब्ध हुने कार्यक्रममा पत्रकारहरुको उपस्थिति थेगिनसक्ने हुन्छ ।’
कसैले कुनै कार्यक्रममा बोलाउँदैमा पत्रकार जानै पर्छ भन्ने हुन्न । गइहाल्यो भने पनि समाचारीय मूल्य नभएको सूचनाबाट पत्रकारले कसैलाई खुसी पार्नैका लागि समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यो समाचार लेख्ने वा नलेख्ने, कार्यक्रममा जाने वा नजाने भन्ने कुरा पत्रकारमा निहीत हुन्छ । भत्ताको लोभ देखाएर पत्रकार बोलाउने व्यक्ति वा संस्था पनि दूधले नुहाएको जस्तो चोखो हुन्न । भत्ता हुँदा जस्तोसुकै कार्यक्रममा जाने र समाचार नै नभएको विषय समाचार बनाउने, नहुँदा नजाने प्रवृत्ति पक्कै राम्रो होइन । पत्रकारले सूचनालाई महत्व दिन्छन्, दिनुपर्छ । अभ्यास ठीक विपरित पनि छ ।
कुनै आयोजकले कुनै कार्यक्रमबारे रिपोर्टिङका लागि निम्तो दिँदा भत्ता छ कि छैन भनेर हाकाहाकी सोध्ने पत्रकारहरुको संख्या यहाँ उत्तिकै छ । अवस्था यो सम्म छ कि पत्रकारहरुले गरेकै कार्यक्रममा समेत कतिपय पत्रकारहरु भत्ताको कुरा उठाउँछन्, आश गर्छन् । यो गलत प्रवृत्ति व्यवसायिक पत्रकारिता र व्यवसायिक पत्रकारका लागि दुखद हो । यसले पत्रकारको दक्षता विकास भन्दा उसलाई माग्ने र थाङ्ने मात्र बनाउँछ । हामीले गर्न खोजेको अभ्यास भने व्यवसायिक पत्रकारिता हो । पत्रकारको छाता संस्था भएकाले पत्रकारको क्षमता विकास र दक्षता वृद्धिको काम महासंघको दायित्व पनि हो । महासंघको अभ्यास पनि ठीक उल्टो छ ।
महासंघको ठेकेदारी !
जिल्लामा हुने कार्यक्रम सफल बनाउन व्यवसायीक पत्रकारहरुको संस्था भएको हुँदा कतिपयले पत्रकार महासंघलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्छन् । समन्वय गरिदिएबापत प्रायः संस्थाहरुले महासंघलाई केही सहयोग पनि उपलब्ध गराउँछन् । तर अधिकांश सहयोग संस्थामा नभइ पदाधिकारीको खल्तीमा जाने गरेको विषयमा यहाँका पत्रकारहरु जानकार नै छन् ।
कुनै व्यक्ति, संघ÷संस्था वा कार्यालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रमबारे पत्रकारहरुलाई खबर गर्ने जिम्मा लिएर महासंघले आयोजकलाई अप्ठेरोमा पारेका थुप्रै दृष्टान्तहरु यहाँ छन् । भर्खरै मात्र एउटा नयाँ सरकारी अड्डाको उद्घाटनमा पत्रकारहरु बोलाउने ठेक्का लिएको महासंघले अन्तमा आएर धोका दियो । उक्त सरकारी अड्डाले सहयोग उपलब्ध नगराउने थाहा पाएपछि जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले कसैलाई खबर नै गरिदिएनन् । जसका कारण सर्वसाधारणलाई पु¥याउनै पर्ने सूचना प्रभावकारी रुपमा पुग्न सकेन । यसो हुनुको प्रमुख कारण त्यो संस्थासँग मिडिया संयोजन वापतको बजेट थिएन ।
महासंघ बाँके शाखाप्रति लाग्दै आएको अर्को आरोप यो पनि छ कि— उसले भत्ता, फेलोसिप, केही आर्थिक उपार्जन हुने कार्यक्रममा पारदर्शिता अपनाउँदैन । गुपचुपरुपमै निकटस्थहरुलाई मात्र जानकारी गराउँछ । कुनै कार्यक्रममा पत्रकारहरु अधिक देखियो वा निम्तो नभएकाहरु पनि पुगे भने बुझे हुन्छ कि त्यहाँ पक्कै भत्ता छ !
समाचार कि विज्ञापन ?
जिल्लामा सञ्चालित मिडियाहरु आर्थिकरुपमा सम्पन्न छैनन् । विज्ञापन संस्कृति कमैमात्र भएकोले पनि होला यहाँका अधिकांश मिडियाहरु हम्मेहम्मे गरेरै चलिरहेका छन् । समाचारकै भरमा मात्र मिडिया पक्कै चल्दैन । मिडिया बाँच्नका लागि विज्ञापन अनिवार्य नै हुन्छ । तर विज्ञापन पाउने नाममा यहाँका मिडियाहरु जानेर÷नजानेर हैसियत नभएकाहरुलाई स्थान दिइरहेका छन्, समाचार नै नबन्ने विषयलाई महत्वकासाथ उठान गरिरहेका छन् । हैसियत नभएकाहरु, समाजमा नकारात्मक छवि भएकाहरुलाई समेत नायक बनाउने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा यहाँका मिडिया र मिडियाकर्मी हल्का हुन पुगेका छन् । मिडियाकर्मीप्रति विगतमा जस्तो आम मानिसको सम्मानजनक नजरिया छैन । कतिपय पत्रकारहरु घोषित रुपमा त कतिपय अघोषित रुपमा समूह बनाएर मिडियामा सिण्डिकेट चलाइरहेका छन् । पत्रकारिताका नाममा कमाउ धन्धा चलाइरहेका छन् ! यस्तो कुरा सुन्दा र भन्दा दुःख लाग्छ ।
अहिले सतहमा आएका बाँकेको पत्रकारिता क्षेत्रका गलत प्रवृत्ति र महासंघकै संलग्नतामा अनियमितता काण्ड अख्तियारसम्म पुगेपछि यस विषयमा सघन बहस छेडिएको छ । अख्तियारसम्म पुगेर अनियमितता काण्ड उछालिएपछि निम्तिएको यो बहस पत्रकार, पत्रकार महासंघ र पत्रकारिताकै मर्यादा जोगाउने एउटा अवसर बनाउन सक्नुपर्छ । पत्रकारको आवरणमा गलत कार्य गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरुलाई यही विन्दुबाट किनारा लगाउन र पत्रकारिताप्रति जनताको विश्वास जगाउन पनि यो बहसलाई सार्थक मुकामसम्म पु¥याउनु जरुरी देखिएको छ ।